Daryeelka Shakhsiyeed Ragga | Ragga Stylish
Rag aad u tiro badan ayaa bilaabaya inay daryeelaan nafteena si ka weyn, ama adoo adeegsanaya kiriimyada, sameeya daaweyn kala duwan ama xitaa qalliinno kala duwan. Soo hel talooyinka daryeelka shakhsiyeed ee ugu fiican Caadi ahaan maahan hawl fudud laakiin halkan waxaad ka heli kartaa qaar badan oo ka mid ah kuwa ugu fiican ee aad ka heli karto shabaqa oo aad mar dambe codsan karto.
Baro adduun cusub si is ilaali naftaada kuna ilaali dhalinyaro iyo qurux inaad ciyaareyso ciyaar weyn oo gabow ah hadaadna durba da 'yartahay, ka faa'iideyso tilmaamahan si aad naftaada u daryeesho sida ugu macquulsan.
by Alicia tomero samee 2 maalmood .
Wiilasha qaan-gaarka ah waxay ku jiraan marxaladda korriinka ee ugu wanaagsan ee aadanaha. In kasta oo ay xoogaa isku khilaafsan tahay dareenka, sidoo kale…
by Alicia tomero samee 3 maalmood .
Albaabka 40ku wuxuu sii wadaa inuu noqdo daaqad weyn oo furan si loo fuliyo riyooyin badan. Ragga da'daan...
Fashion-ka waxa lagu balaadhiyey qaabka iyo ka soojeedinta. Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo fikradaha iyo asalka asalka ah ee…
Sida timaha loogu gooyo googooye
Helitaanka dariiqa saxda ah ee lagu gooyo mandiilku waxay noqon kartaa wax xun, laakiin waxaan kuu xaqiijin karnaa…
Sida loo nadiifiyo madaw ee wejiga
by Alicia tomero samee Toddobaadyada 2 .
Madax-madowgu waa fool-xumo, muuqaalkoodana waxaa sabab u ah arrimo kala duwan oo sababa inay xidhmaan daldaloolada….
Sida timaha loogu deeqo
by Alicia tomero samee Toddobaadyada 3 .
Hubaal wax ka badan hal mar ayaad ka fikirtay sida timaha loogu deeqo. Caadi ahaan dad badan ayaa raba inay beddelaan muuqaalkooda oo waa ...
Keratin waa borotiin dabiici ah oo aan milmi karin oo loo isticmaalo daawaynta quruxda, gaar ahaan daryeelka timaha....
Sannadkan 2022 gadhka gaaban wuxuu sii wadaa inuu dejiyo isbeddelka. Wali waa astaan ​​ragannimada lagu garto waxaana jira rag...
Rag badan ayay caqabad weyn ku tahay in ay ka tanaasulaan sidii ay saaxiib u yeelan lahaayeen. Waxay noqon kartaa wax ka dhashay khibrad...
Sida loo noqdo nin soo jiidasho leh
by Alicia tomero samee 1 bishii .
Guusha haweeneydu waxay weli ku jirtaa nolosheenna bulshada, waxaana rajeyneynaa inaysan hoos u dhicin. Haweenka beryahan...
Ma leedahay finan finanka ah?
Isbeddellada moodada: Gip Hipster
Afar qalad oo caan ah oo ragga leh timo fiican (iyo sida loo saxo)
Timo jarista ugu wanaagsan ragga wajiyada wareega
Maxaan ku sameynaa timaha hoose?